काठमाडौंबाट गाउँ फर्कनलाई पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य ! – RemitKhabar
काठमाडौंबाट गाउँ फर्कनलाई पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य !
by Remit Khabar - 18/10/2020 0
गत बुधबार सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले एक आदेश जारी गर्यो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘जो जहाँ छौं त्यही बसेर चाडपर्व मनाउँन हार्दिक अनुरोध गर्दै कार्तिक १ गतेबाट उच्च जोखिम रहेका स्थानहरुबाट यस जिल्लामा प्रवेश गर्दा ७२ घण्टा भित्रको पीसीआर रिपोर्ट साथ प्रवेश गर्न जानकारी गराइन्छ।’
रिपोर्ट नहुनेलाई अनिवार्य रुपमा तोकिएको क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने अन्यथा आदेशको अवज्ञा गर्ने, गराउनेलाई स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ र संक्रमण ऐन २०२० अनुसार कारबाही हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश बस्नेतले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ।
गण्डकीकै अर्को जिल्ला पर्वतले पनि बाह्य जिल्लाबाट आएका व्यक्तिलाई अनिवार्य १४ दिनको क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयको कार्यान्वयनका लागि वडाध्यक्ष र सदस्यहरुलाई अनुगमनको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
काठमाडौंसँगै जोडिएको धादिङमा दसैंलाई लक्षित गरेर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। केन्द्र सरकारले जिल्ला प्रशासनलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गरी केही निषेधका कार्यक्रमहरू थप गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रबहादुर मल्लले जानकारी दिए।
प्रशासनले लामो तथा छोटो दुरीका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनको सम्बन्धमा भने केन्द्र सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न भनेको छ।
प्रशासनले चाडपर्व मनाउँदा एकघर परिवारमा बसिरहेका सदस्यबाहेक नाता, कुटुम्ब तथा छिमेकीहरूमा जाने भेला हुने कार्य नगर्न सबैलाई अनुरोध गरेको छ। यस्तै सामूहिक पूजा, अर्चना, प्रार्थना नगर्न पनि प्रशासनको आग्रह छ।
पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गर्नुको अर्थ छैनः विज्ञ
जनस्वास्थ्यविज्ञ डा.रवीन्द्र पाण्डे एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा पीसीआर रिपोर्ट माग्ने कुरा व्यवहारिक नभएको बताउँछन्। उनले त्यसका अलवा सावधानीमा जोड दिनुपर्ने बताए।
‘पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भनेको परीक्षण गरुञ्जेलसम्मको लागि हो। रिपोर्ट आएको ७२ घण्टा हैन, केही समयमा पनि हामी कोही संक्रमितको सम्पर्कमा आयौं भने हामीलाई पनि संक्रमण हुनसक्छ’, पाण्डेले भने, ‘बरु यसपल्ट दशैं जो जहाँ छौं त्यही मनाउँने गरौं। जानैपर्ने भए स्वास्थ्य मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गरौं।’
पाण्डेले लामो समय घरमा गएर बस्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै गाउँ जान सुझाए। उनले कर्मचारी, व्यापारी वा जो छिट्टै टीका लगाएर फर्कनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो मान्छे नजाँदा नै उपर्युक्त हुने बताए।
हटस्पट बन्यो बैंक/वित्तीय क्षेत्र सकेसम्म बैंक नजाऔं
आई पे रेमिटमार्फत कारोबार गर्दा बाइक पाइने